iqhutywa — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Yiya kwi ephambili
Nazi ezinye nevidiyo intshumayelo ndanishumayezayo ekuqaleni konyaka San Diego. Umxholo wale nkomfa "Iqhutywa”, ndaza ndakhetha ukushumayela ngamaRoma 12:1-2. Ntoni kubonakale ngathi ukuba ulikholwa abe "baqhutyelwe?” iingongoma yam engundoqo kukuba ikholwa kufuneka ...
1. Siqhutywe Mercy
2. Uwexulwe, uzinqule
Ithemba luncedo yayo!
0 0	LUQULATHE
Nillapoet • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:47 mna • impendulo
uhambo, Wakhe wacinga ngokubulala iintshumayelo yakho ibe podcast?
janna Howard • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:48 mna • impendulo
Trip Lee wena ngumshumayeli othanjisiweyo, nakanjani uThixo wamnika isipho. Makabongwe uThixo, ukuba umzalwana wethu abathanjisiweyo othobekileyo kuKristu! Enkosi ukushumayela kwaye efundisa ilizwi. Indawo kwakho ku “Its nje mna noYesu intsapho thina,” kwaba kanye oko ndandifuna uku- kuva. Enkosi. Phila ukuba umzalwana wakho isipho, sithandazela ukuba nawe!
Steve Waters • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:48 mna • impendulo
ntshumayelo emangalisayo, Ndingathanda ukuva okungakumbi kubo. Ukuba uThixo abe uzuko
Yelowtail7 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:48 mna • impendulo
enkoso ngokwabelana … Ndiya sokundwendwela kwincwadi yabaseRoma.
noMika • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:48 mna • impendulo
jennifer Salas • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:49 mna • impendulo
OH SNAP! undixelele ukuba omnye iinkokeli zam ulutsha wandicela ukuba uqale kokudlula kwincwadi yabaseRoma naye!! kanye BTW, uthetha VERRRYYY KAKUHLE, intsikelelo yakho :)
Jordwins Winslade • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:49 mna • impendulo
Enkosi ukwabelana le ndoda! I baye babona eninzi into ekwabelwana, isandla yokuqala… kwaye ngoko ke nomyalezo ukutshintsha ningamilisi ngokwenene kuthetha nam, apho ndikhona mna e! P.s- Ndiyamthanda inyaniso echazwe ngomculo wakho… kusoloko yayihlaziya! :)
Dria Elleohvee • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:49 mna • impendulo
Ndiyabulela soo kakhulu Nkosi. Le nto yandinceda efana kakhulu nje wayethandaza kuThixo ukuba sinike nje ndibe kwizixekoapho kunjalo uhlobo okanye ukubonisa into. Kuba imbalwa idlulileyo iintsuku ndingatsho ngokunyanisekileyo endiye feelin uxinezelekile madd; angafuni ukuba ingakwazi nokuphuma ebhedini ukuya eklasini, xa ndisiya enkonzweni andiyithandi ukuya kuyo, whatnot kodwa ngale ntsasa Ndavuka waziva ehlaziyekile yaye imini enkulu eklasini ngoko weza ekhaya kwaye babona ividiyo yakho. Andizange bazi ukuba waba blog.
Ndiyambulela uThixo enkonzweni yakho. Ndifuna ukuba nawe kwindawo endihlala, ebandleni lam okanye into.
Enkosi, uthando oluninzi!!
jade Mahouna • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:50 mna • impendulo
i uhlala eFransi i dont ukuqonda xa sishumayela ,ngokuba andithethi nokuqonda english.can kwakho kuguqulela in French nceda
INTLIZIYO ELIKROTI • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:50 mna • impendulo
Trip umsebenzi Good…Ndiyambulela uThixo imeko apho wena ku, ukuze asiyalele kwaye zisikhuthaze. Good umsebenzi kanye kwakhona
Nqakraza apha ukurhoxisa impendulo.
Sweet Victory Umboniso
Khangela le vidiyo Sweet Victory ukusuka album zakutshanje Uhambo ngayo, phakama
Millennials noXolelwaniso Racial
Le ntetho Uhambo ukususela kwiNkomfa ERLC phezu yeVangeli noXolelwaniso Racial. Ngasezantsi ngqangi kuloo umyalezo. Ngoku kuhlwa, Bendikhe wacelwa ukuba bathethe malunga millennials noxolelwano ngokobuhlanga. Kwaye ndiziva nelungelo ukuma apha abe yinxalenye yeli phulo emangalisayo ukuya umanyano ibandla likaThixo. Njenge
Yintoni Izihloko Ngaba Book Xoxa?
Kwincwadi entsha Uhambo ngayo, phakama, wazama ukuba babhale izinto ezifanelekileyo kwesi sizukulwana. Wati njengoko uhamba kwezinye izahluko aze anike incopho bengalindelanga kwisiqulatho.
"Uhambo ebhaliweyo incwadi endicinga ukuba wonke umntu oselula kufuneka ukufunda. Ifuthe lakhe uYesu yaye esi sizukulwana iza elikhulu nolucacileyo ngokuba zonke phepha. Andikwazi abalindeli ukubona ifuthe walo myalezo kwi isizukulwana leyo olambileyo injongo "-. Lecrae, Grammy nokunikwa- ngokuphumelela igcisa @lecrae "Vuka yi
Piper ngayo Rise Intshayelelo
incwadi entsha Uhambo ngayo, phakama, uphuma ngoku! Funda intshayelelo John Piper ukuba le ncwadi ngezantsi. Uyakwazi phambi-odola ncwadi ufumanise ngakumbi apha Risebook.tv Enye yezinto eziphambili ndiyayithanda malunga Trip Lee kunye nencwadi yakhe, phakama, ke eziqhubekekayo nentlonelo nokufaneleka. Injongo apha ukufaneleka kwinkcubeko American eqhelekileyo.
Trip Lee kwiFacebook